WARBIXIN: Saacadaha Ay Muslimiintu Soomayaan Guud Wadamada Caalamka.
Saturday May 27, 2017 - 10:24:25 in Wararka by Super Admin
Malaayiin qof muslimiin ah oo ku nool caalamka daafihiisa kala duwan ayaa maanta bilaabay cibaadada Soonka kadib markii xalay ay bilatay Bisha Barakeysan ee Ramadaan.
Muslimiinta ugu badan ee sooman waxay ku noolyihiin Qaaradda Asia waxaana kusoo xigta qaaradda Afrika oo malaayiin muslimiin ah ku noolyihin.
Sanadkan waxaa aad ukala duwan inta saacadood ee laga soomayo caalamka islaamka iyo wadamada reergalbeedka, wadamada qaar ayay muslimiintu soomayaan 21 saacadood halka wadamada qaar ay dadku soomayaan 10 saac illaa 11 saac.
Wadamada ugu saacadaha yar ee muslimiintu Soomayaan waxaa kamid ah wadamada dhacda mandiqadda Laatiin America waxaana wadamadadaasi kamid ah Arjantiin iyo Chile oo dadku ay soomayaan 10 saacadood xiriir ah.
Wadamada ku xiga ee muslimiintu waqti yar soomayaan waxaa kamid ah Koonfur Afrika, Australia, iyo Newsland oo lasoomayo min 11 Saacadood.
Wadamo ay kamid yihiin Angola,Namibiya, Bustuswana iyo Barzil waxay muslimiintu soomayaan 12 saacadood oo xiriir ah.
Waxaa jira waddamo katirsan caalamka islaamka oo muslimiintu ay soo mayaan 14 saacadood xiriir ah waxayna wadamadaasu kala yihiin Soomaaliya,sacuudig,Ereteria,Yemen,Jabuuti,Kenya,itoobiya iyo Tanzaaniya.
Wadamada dhaca Waqooyiga qaaradda Afrika iyo galbeedkeeda ayaa laga soomayaan 13 saacadood xiriir ah waxaana wadamadaasi kamid ah: aljazaa’ir,Marocco, Muritaaniya, Maali,Neyjar,Liibiya iyo Tuunis.
Malaayiin muslimiin ah oo kunool wadamada dhaca waqooyiga America ayaa iyana soomaya 16 saacadood xiriir ah waxaana wadamadaasi kamid ah Meksiko, Mareykanka iyo Canada.
Arrintaas ka duwan waxay kajirtaa wadamada Qaaradda Yurub oo muslimiintu ay soomayaan wax kabadan 21 saacadood xiriir ah sida wadamada Iskaandaneefiyaanka oo kamid yihiin Filland, Norway,Denmark iyo Sweedan muslimiintu af haysanayaan 19 illaa 20 saac Jazeeradda Iceland iyana waxay muslimiintu soomayaan 21 saacodood.
Sidoo kale Malaayiin qof muslimiin ah oo kunool wadanka Ruushka ayaa sanadkan soomaaya maalin walba 20 saacadood xiriir ah
Ugu dambeyn muslimiinta kunool wadamada Dhacay Koonfur Bari Qaaradda Asia waxay soomayaan 14 saacadood illaa 16- saacadood waxaana wadamadaas kamid ah wadanka Indonesia oo ay kunool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka.
Hoos Ka Daawo ka daawo Map-ka si uu kuugu weyndaayo sawirka dushiisa Click dheh